Address Bursa M maka Turkey mbụ anụ ụlọ na National Automobile Production? | RayHaber
HomeTurkeyMpaghara Marmara16 BursaAddress Bursa M maka Turkey mbụ anụ ụlọ na National Automobile Production?
01 / 04 / 2019 16 Bursa, General, Ụzọ Awara Awara, Ụgbọ okporo ígwè Tire, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Turkey
The mbụ ụgbọ ala uretimde na mpaghara mba scholarships amasị lebara m turkiyenin Price
Mgbe ọ na-abịakwute Bursa na akụrụngwa, ụdị mba dịka Tofaş Fiat na Oyak Renault na-abata n'uche. Ọzọkwa, Karsan, nke na-arụpụta ụgbọ okporo ígwè, na Güleryüz, Tezeller na Boztekin, nke na-emepụta bọs, ekwesịghị ichezọ.
A na-agbakwụnye bọs abụọ na-emepụta na ogbako na Küçükbalıklı.
Ọbụna a na-emeghe Ụlọ Akwụkwọ Ọzụzụ Ikike Na-adọba ụgbọala maka ịzụ ndị ọrụ maka akụrụngwa nke na-ahụ maka ụlọ ọrụ na Bursa, bụ ebe mmepụta nke ụlọ ọrụ dị ike.
Turkey mbụ amaala ụgbọ ala na isi obodo n'ihi na mmepụta nke akpakanamde address na-egosi na Bursa.
Mmepụta ụgbọ oloko ụlọ na nke mba na Bursa, ebe President Recep Tayyip Erdoğan na-etinye aka dị oke mkpa na ebe ọtụtụ obodo na-asọ mpi, ga-abụ ugwu maka ụlọ ọrụ na-ahụ maka ụgbọ ala na Bursa.
Enweghị ọkwa ọkwa ọ bụla, ma e nwere akụkọ na TEKNOSAB na-enweta ibu.
Ntinye akụrụngwa maka ụlọ ọrụ mmepụta ihe dị elu nke dị nso na Karacabey bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na njedebe ikpeazụ. Ụzọ mgbago na ịbịaru nso n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè Bursa-Bandırma n'ọdịnihu dị irè na mmasị TEKNOSAB.
Otu okwu ...
Volvo, otu n'ime ndị na-agba ụgbọ ala ụwa, chọrọ itinye ego, ma Erdem Saker, bụ onyeisi obodo nke oge ahụ, adịghị ekpo ọkụ n'ihi ụfụ ụlọ ọrụ nke obodo ahụ. Ọ bụghị ihe na-ezighị ezi maka ụbọchị ndị ahụ, n'ihi na egbochila ihe owuwu mmepụta ihe.
Ọzọ, nsogbu dị n'etiti ụwa akpakanamde Refeyim Volkswagen chọkwara ime na Bursa na Turkey n'ihi na akụrụngwa nke mmepụta ihe atụmatụ na-emepụta ụgbọala.
Anyị nụ na enwere ụfọdụ usoro na ntụziaka a na kọntaktị mbụ na ụlọ ọrụ dị iche iche na òtù dị iche iche eguzobewo na Bursa ma ịchọ ebe kwesịrị ekwesị amalitela.
Na ebe ahụ ...
Ọzọkwa, anyị nụrụ na obodo ahụ na-akpachapụ anya iji rube isi atụmatụ atụmatụ ntụrụndụ ọhụrụ ahụ.Ahmet Emin Yılmaz)
Akụkọ maka ụlọ ọrụ mmepụta ihe n'ime ụlọ na Konya
Okwu Kwesịrị Ekwesị na National Car Konya
Turkey mbụ onwe na mpaghara mba dizel Engine ...
ARUS nwetara mmepụta ụlọ na nke mba
Imu Dee kwuru Turkey si Car Design ...
A National National na National ụgbọala mepụtara na GEN ika
Obere ụlọ na nke mba DMA 5,2 Pound Charger 450…
Adreesị: Sakarya Olacak
Nnukwu egwu na Bursa Domestic Automobile
Ngwuputa Ugbo Ala
Ụlọ Akwụkwọ Gọọmenti Ọkachamara nke Akaụntụ
25 Meter Electric Electric Na-aka Mma maka Manisa
Obodo na National Brand 'Talas Tram'